Ngosipụta dị nfe dị mfe - Ngosipụta Dijitalụ na Ngwanrọ Ngwanrọ vidiyo
Ihe ngosi Digital & Video Wall Software
Ihe ngwọta kachasị dị na ahịa!
Commandlọ Ọrụ Iwu & Firefighter
Ejiji na ụlọ ahịa
Talọ oriri na ọụuụ & ebe a na-ere nri
Ụlọ Azụ Omume
Ndị ọrụ mgbanyụ ọkụ & ebe nnapụta
Cellarman & Mmanya cellar
Mapụtara Car Parts Shop
Aclọ ọgwụ na otu ọgwụ
Estlọ Ọrụ Estlọ
Italslọ ọgwụ & Ọrụ Mberede
ITlọ ọrụ IT
Podcasters & ndị na-ede blọgụ
Digital Signage software maka ulo oru
Ma ị bụ obere azụmaahịa ma ọ bụ nnukwu ụlọ ọrụ, Ngosipụta Ngosipụta Dị Mfe bụ sọftụwia ihe ngosi dijitalụ nke na-eme ka ọ dị mfe igosipụta mgbasa ozi gị na ọtụtụ ngosipụta.
Site na 1 Ikikere ikike Gwa anyị okwu banyere azịza ụlọ ọrụ anyị maka nhọrọ ngosipụta enweghị njedebe.
Maka Ngosipụta Ngosipụta Dị Mfe, ndị ahịa ọ bụla pụrụ iche na nke a bụ ihe kpatara anyị ji eme otu isi iji nye ọrụ 100% na-arụ ọrụ maka ndị ahịa ọ bụla!
EGO NA-EBURU N'AGBATA
Ngosipụta dị mfe dị mfe bụ kacha mma dijitalụ signage software maka nzukọ ọ bụla chọrọ igosipụta ozi dijitalụ na ndị ahịa ha na ndị ọbịa.
Cafes & talọ oriri na ọtaụ Resụ
Lọ ahịa ejiji na ụlọ ahịa
Lọ Ọrụ Iwu & Firefigthers
Ọgwụ na Ahụike
Olivia nke V
Ngosipụta na ihuenyo 1 ruo mpaghara 4 pụrụ iche
Ngosipụta na-eme atụmatụ
Gosiputa ya na ihuenyo 6 ruo mpaghara 24 pụrụ iche
Nweta netwọdi nke ime obodo (chọrọ 2 ikikere: PC Server na PC Player)
Ntinye & Nkwado Onsite
Ọtụtụ ndị ọrụ
site € 899 kpochapụ VV *
Ndị ahịa anyị hụrụ naanị etu o si dị mfe iji gosipụta mgbasa ozi ha na Easy Multi Display. Ihe ngwanrọ nke ngwanrọ na-eduzi gị site na nhazi usoro na usoro site na usoro nzọụkwụ, na-ajụ gị ajụjụ niile dabara n'ụzọ.
Kwesighi ịbụ onye gọọlụ iji bilie ma na-agba ọsọ na Ngosipụta Ngosipụta Dị Mfe. Nke a bụ ya mere ngwanrọ anyị ji bụrụ na kacha mma dijitalụ signage software
- Mfe Ngosipụta Dị Mfe na-eduzi gị na usoro Mbido.
- Chekwaa nhazi nhazi nke otutu ma buru ha nwayọ.
- Nhọrọ nke asụsụ: Bekee, French, Spanish, Chinese, Deutch na-aga n'ihu ...
Chọrọ ntakịrị enyemaka? Anyị na-enye ọzụzụ n'ịntanetị ma ọ bụ na saịtị ma ọ bụ nkwado ngwanrọ, biko kpọtụrụ anyị!
MAKA MALTI MARA MAKA MARA EGO
Ihe Nlereanya maka a ahịa ọgwụ na 4 hụ na i meziri
LEE Vidio ANY VID NIILE
Chọrọ onyinye pụrụ iche & ego?
Virtual Cockpit UK Limited site Shares
71-75 Shelton Street, Ogige Covent, London WC2H9JQ
EMD na-ekesa na EEC site n'aka TekAngel
Mfe Ngosipụta Ntuziaka V2 dị mfe
Kedu ka m ga-esi gosipụta nkwalite?
Olee otú iji anyị remote control?
Etu esi egosiputa ozi ederede?
Etu esi eji ihu igwe 2 na WIN10?
Etu esi egosipụta ọtụtụ vidiyo otu na ndị ọzọ?
Etu esi egosipụta otu onyonyo ahụ n'ọtụtụ ụlọ ahịa?
Etu esi egosipụta faịlụ Powerpoint gị?
Gịnị bụ ọdụ ụgbọ mmiri ngosi?
Kedu otu Ngosiputa Ngosiputa Igwe di Nfe ga-enyere gị aka imelite onyonyo data gị?
Gini mere iji họrọ usoro ihe omuma nke dijitalụ n'èzí?
Gịnị digital signage ngwaike m kwesịrị iji?
Uru 7 nke Ngosiputa Digital
Kedu otu esi eji akara ngosi dijitalụ maka ụlọ ahịa ọgwụ gị?
| Copyright © Easy Multi Display 2021 Digital Signage & Video Wall Software maka Ulo oru |
Ndewo, aha m bụ Guy Condamine, onye guzobere EMD, ka anyị kparịta ụka ọnụ.